Voucherify: Tangisa Zvekukwidziridzwa Zvako NeVoucherify's Yemahara Chirongwa | Martech Zone
Voucherify ndeye API-yekutanga Kusimudzira uye Kuvimbika Management Software iyo inobatsira kuvhura, kubata, uye kuronda mishandirapamwe yekusimudzira yakasarudzika senge macoupon ekuderedzwa, otomatiki kukwidziridzwa, makadhi ezvipo, sweepstake, zvirongwa zvekuvimbika, uye zvirongwa zvekutumira.
Kukwidziridzwa kwemunhu, makadhi ezvipo, kupa, kuvimbika, kana zvirongwa zvekutumira zvinonyanya kukosha pamatanho ekutanga ekukura.
Kutanga-ups kunowanzo kunetseka nekutora kwevatengi, uko kutangisa munhu akasarudzika makuponi, kukwidziridzwa kwengoro kana makadhi ezvipo kunogona kuve kwakakosha kukwezva vatengi vatsva.
Pamusoro pe79% yevatengi vekuUS uye 70% yevatengi vekuUK vanotarisira uye vanokoshesa kurapwa kwega kunouya neakagadzirwa akagadzirwa e-commerce zviitiko.
Sezvo hwaro hwevatengi hwekutanga-ups hunowanzo kuderera, upselling chikamu chakakosha chechirongwa. Kutangisa ngoro dzekusimudzira uye zvigadzirwa mabundle zvinogona kubatsira nekusimudzira zvakanyanya.
Referral zvirongwa zvakakosha kuti izwi ribude uye rinogona kunge riri injini yekukura yekutanga-ups ine chigadzirwa chikuru asi kuoneka kwakaderera (OVO Simba, semuenzaniso, akashandisa nzira iyi kupinda mumusika mutsva).
Referral marketing inogadzira kubva ku3 kusvika ku5 times high conversion rates kupfuura chero imwe nzira yekushambadzira. 92% yevatengi vanovimba nezano reshamwari dzavo uye 77% yevatengi vanoda kutenga chigadzirwa kana kushandisa masevhisi anokurudzirwa nemunhu wavanoziva.
Nielsen: Vimba neKushambadza
Iyi ndiyo yakakosha sosi yevatengi vatsva, kunyanya kune niche mabhizinesi.
Chirongwa chekuvimbika chingaite sekunge chakawandisa kune kambani inotanga asi pasina imwe, vari kuisa njodzi yekurasikirwa nevatengi vavanoisa nesimba rakawanda uye mari kuti vawane. Uyezve, kunyange kuwedzera kwe5% mukuchengetedza kunogona kutungamirira kune zvakanyanya 25-95% kuwedzera purofiti.
Voucherify ichangobva kuunza a chirongwa chekunyoresa chemahara. Uyu mukana wakanaka wekutanga-ups uye maSME kuti atange otomatiki, akasarudzika kukwidziridzwa uye kunatsiridza kutora kwevatengi uye nekuchengetedza mahara, ine shoma yekuvandudza nguva yekudyara. Urongwa hwemahara hunosanganisira ese maficha (kunze kwegeofencing) nemhando dzemishandirapamwe, kusanganisira kukwidziridzwa kwemunhu, makadhi ezvipo, sweepstakes, kutumira, uye mishandirapamwe yekuvimbika.
Isu tinofara kutanga kupa chirongwa chemahara chekunyorera. Isu tinotenda kuti ichabatsira vazhinji vanotanga-up uye maSMBE kutanga-kutanga kukura kwavo uye isu tinofara kuve chikamu chayo. Voucherify yakavakwa nevagadziri, yevagadziri uye isu tinofara kupa tekinoroji yemazuva ano kune ese masayizi emabhizinesi, nemutengo unokwanisika kwavari.
Tom Pindel, CEO weVoucherify
Iyo Yemahara Voucherify Chirongwa Inosanganisira Zvinotevera
Nhamba isina muganhu yemashandirapamwe.
100 API mafoni/awa.
1000 API mafoni / mwedzi.
Kuzvishandira pabhodhi uye kudzidziswa kwemushandisi.
Mumwe muenzaniso wekutanga-up iyo yakakura uchishandisa Voucherify ndeye Tutti. Tutti ndeye UK-yakavakirwa kutanga-up iyo inopa chikuva chevanhu vanogadzira kwavanogona kuhaya nzvimbo kune chero chinodikanwa chekugadzira, kungave kuri kudzokorora, kuongorora, kufotohota, kupfura firimu, kuyerera kwepamoyo, kana zvimwe. Tutti aida kutangisa zvirongwa zvekutumira uye mishandirapamwe yekusimudzira kutora kwavo uye yaida mhinduro yesoftware ingave API-yekutanga uye inoenderana neyazvino microservices-based architecture inoshandisa akasiyana API-based mapuratifomu, senge. mutsetse, Chikamu, ActiveCampaign.
Vakasarudza kuenda neVoucherify. Vakatarisa vamwe API-yekutanga software vanopa asi vanga vaine mitengo yakakwira zvakanyanya kupfuura Voucherify kana kuti havana kupa ese ekusimudzira mamiriro mupakeji yekutanga. Kubatanidzwa neVoucherify kwakatora mazuva manomwe kuTutti, aine mainjiniya maviri esoftware, akaverengerwa kubva pakutanga kwebasa rekubatanidza kusvika mushandirapamwe wekutanga watanga. Kutenda kuVoucherify, kufarira mukupa kwavo kwakawedzera uye timu yavo yakakwanisa kushambadzirwa nekupa zvidzikiso kune vanopa rubatsiro uye ekutanga-incubator.
Voucherify Tutti Nyaya Yekudzidza
Unogona kuwana kuenzanisa kwakadzama kwezvirongwa zvekunyorera uye miganho yavo paVoucherify pricing page.
Voucherify ndeye API-centric kukwidziridzwa uye kuvimbika manejimendi software inopa kurudziro yemunhu. Voucherify yakagadzirirwa kupa simba zvikwata zvekushambadzira kuti ikurumidze kuvhura uye kutonga nemazvo mamiriro uye yakasarudzika makuponi uye echipo kadhi kukwidziridzwa, kupa, kutumira, uye zvirongwa zvekuvimbika. Kutenda kune API-yekutanga, isina musoro yakavakirwa uye yakawanda-ye-ye-bhokisi kubatanidzwa, Voucherify inogona kubatanidzwa mukati memazuva, ichipfupisa zvakanyanya nguva-ku-musika uye kutema mutengo wekusimudzira.
Programmable zvidhinha zvekuvaka zvinobatsira kubatanidza zvinokurudzira nechero chiteshi, chero mudziyo, uye chero e-commerce mhinduro. Dashboard inoshamwaridzana nemushambadzi kubva uko timu yekushambadzira inogona kuvhura, kugadzirisa kana kuongorora ese ekusimudzira mishandirapamwe inobvisa mutoro kubva kuchikwata chekusimudzira. Voucherify inopa injini inoshanduka yemitemo kuti uwedzere kutendeuka kwako uye mazinga ekuchengetedza pasina kupisa bhajeti rekusimudzira.
Voucherify inobvumira makambani eese saizi kuti avandudze kutora kwavo, kuchengetedza, uye kutendeuka mitengo. sezvinoita hofori dze e-commerce, pachidimbu chemutengo. Kubva nhasi, Voucherify yakawana kuvimba nevatengi vanopfuura mazana matatu (pakati pavo Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, kana Bloomberg) uye inoshandira mamirioni evatengi kuburikidza nezviuru zvemishandirapamwe yekusimudzira. pasi rose.
Edza Voucherify Yemahara
kuburitsa: Martech Zone yakabatanidza affiliate links muchinyorwa chino.
Tags: agileoneotomatiki kushambadzadhisikaundi makuponikusimudzirwa kwemaharachipo makadhikuvimbika chirongwa apizvirongwa zvekuvimbikanielsenpromotion apizvirongwa zvekutumiraChikamusweepstakestom pindelvocha
Dhijitari kushambadzira nyanzvi uye chigadzirwa maneja. Kufarira dhijitari chigadzirwa manejimendi uye kushambadzira - zvese kubva pasoftware yekuvakisa maitiro, maitiro e manejimendi manejimendi, UX maitiro kune ekushambadzira marongero.
ZoomInfo: Kurumidza Yako B2B Pipeline NeKambani Dhata seSevhisi (DaaS)